ကွဲပြားခြင်း | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
လူခပ်သိမ်းတို့သည်ယေရှုခရစ်၏ အကျိုးကိုမရှာ December 10, 2009
Filed under: ကွဲပြားခြင်း — amayaphay @ 11:57 am
လူခပ်သိမ်းတို့သည်ယေရှုခရစ်၏ အကျိုးကိုမရှာ၊ ကိုယ့်အကျိုးကိုသာရှာကြ၏။ (ဖိ ၂း၂၁)
ကျွန်ရောင်းဝယ်ရေးစင်မြင့်ပေါ်တွင် မိန်းမငယ်တစ်ဦး ဘဝကိုနာကြည်းစွာနဲ့ မျက်ရည်ကျနေပါသည်။ သူ့အလှည့်ရောက်သောအခါ ဈေးပြိုင်ပေးကြပြီး အမြင့်ဆုံး ဈေး၏ နှစ်ဆကို လူကြီးလူကောင်းတစ်ဦးက ပေးလိုက်ပါသည်။ စင်မြင့်ပေါ်မှ ထိုအမျိုး သမီးငယ်ကို ခေါ်ဆောင်လာပြီး အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ကို ချုပ်ပေးပြီးသောအခါ ကျွန်ပိုင်ရှင်များက ထိုလူကြီးလက်ထဲသို့ အမျိုးသမီးငယ်အား အပ်ပေးစဉ် အမျိုးသမီး ငယ်က လူကြီးမင်း၏မျက်နှာအား တံတွေးနှင့် အားရပါးရ ထွေးလိုက်ပါသည်။ လူကြီးမင်းက တည်ငြိမ်စွာဖြင့် အိတ်ထဲမှ လက်ကိုင် ပုဝါကိုထုတ်ပြီး သုတ်လိုက်ပါ သည်။ ပြီးနောက် လူကြီးမင်းက ]မိန်းမငယ် ဒီစာချုပ်ကို သေသေချာချာ သိမ်းထားပါ၊ မင်းကိုဘယ်သူမှ ကျွန်မပြုနိုင်တော့ဘူး၊ မင်းကျွန်ဘဝကနေ လွတ်မြောက်သွားပြ}ီ ဟုဆိုပြီး စာချုပ်ကို မိန်းမငယ်လက်ထဲသို့ ထည့်ပေးခဲ့ကာ လှည့်ပြန်သွားပါသည်။ မိန်းမငယ်မှာ ခေတ္တမျှတွေဝေသွားပြီး စဉ်းစားကာ လူကြီးမင်းအနောက်သို့ပြေးလိုက်သွား ပါသည်။ အဲဒီနောက် လူကြီးမင်းရှေ့တွငဒူးထောက်ပြီး ]ကျွန်မကို ကျွန်ဘဝကနေ လွတ်မြောက်စေတဲ့ လူကြီးမင်းရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ တစ်သက်လုံးကျွန်ခံပါရစေ} လို့ အခွင့် တောင်းခံ လိုက်ပါတော့သည်။ဒီလိုပဲ ကျွန်ုပ်တို့လူသားအားလုံးကို အပြစ်ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့ ယေရှုဘုရားရဲ့ လက်တော်ထဲမှာ ကျွန်ခံရခြင်းထက် လုံခြုံစိတ်ချသောအသက်တာ အဘယ်မှာရရှိနိုင်ပါမည်နည်း။
Filed under: ကွဲပြားခြင်း — amayaphay @ 11:56 am
ဘုရင်မကြီးတစ်ဦးသည် တောတွင်းလျှောက်လမ်းအတိုင်း သာမန်အရပ်သား ဝတ်စုံဖြင့် လမ်းလျှောက်ထွက်လေ့ရှိပါသည်။ တစ်နေ့ လမ်းလျှောက်နေစဉ် မိုးသည်း ထန်စွာ ရွာသွန်းလာသည့်အတွက် နီးရာတဲတစ်ခုအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခိုနားခဲ့ပါသည်။ များမကြာမှီ ထိုတဲပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးပြန်လာပါသည်။ မိုးကလည်း မစဲနိုင်သည့် အတွက် ထိုအမျိုးသမီးကြီးထံမှ ထီးတစ်လက်ငှါးပေးပါရန် အကူအညီ တောင်းခံခဲ့ ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီးကြီးက ၄င်း၏ ထီးနှစ်လက်ရှိသည့်အနက်မှ ထီးအစုတ် တစ်လက်ကို ငှါးပေးလိုက်ပြီး စကားမာမာဖြင့် ဆက်ဆက်ပြန်လာပေးဖို့ အထပ်ထပ် မှာလိုက်ပါသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ထိုအမျိုးသမီးကြီး၏ တဲရှေ့သို့ ဘုရင့်နန်းတော်မှ မြင်းရထားများ ဆိုက်ရောက်လာပြီး ကိုယ်ရံတော်တစ်ဦးက ဘုရင်မကြီးငှါးသွားသည့် ထီးကိုပြန်လာပေးကြောင်း ပြောပြီးပြန်သွားပါသည်။ ထိုအခါမှ ဘုရင်မကြီးကို အကောင်းဆုံးမပေးလိုက်ရ၊ ဧည့်မခံလိုက်ရသည့်အတွက် နောင်တကြီးစွာ ရလေသတည်း။ ကျမ်းစာက အငယ်ဆုံးသောသူ တစ်ယောက်အားပြုသမျှသည် ငါ့အား ပြုပြီ။ မင်းကြီးကငါအမှန်ဆိုသည်ကား သင်တို့ သည် ဤသူတို့တွင် အငယ်ဆုံးသောသူ တစ်ယောက်အား မပြုသမျှတို့ကို ငါ့အားမပြုကြပြီဟု ပြန်၍ မိန့်တော် မူလတံ့။(မ ၂၅း၄၅) မိမိရရှိသမျှ၏ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို ဖယ်ပြီး ဘုရား၏အမှုတော်ဆောင်၊ မိမိဝန်းကျင်ရှိ အမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေသော တပါး အမျိုးသားများ၊ (ယေရှုက မိမိဝန်းကျင်ရှိ ခက်ခဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေ သူတိုင်းအား လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာမခွဲခြားဘဲ၊ အယုတ်အမြတ်မရွေး ဖေးမကူညီ ခြင်းသည် ယေရှုကို ကူညီခြင်းနှင့် အတူဖြစ်၏ဟု ပညတ်ခဲ့ပါသည်။) မိဘမဲ့နှင့် မုဆိုးမတို့ကို ဝစွာကျွေးမွေး ပေးကမ်းဖို့ ဆိုထားပါသည်။(တရား ၂၆း၁၂)
Filed under: ကွဲပြားခြင်း — amayaphay @ 11:55 am
လူအချို့က သင်တို့သည် ကောင်းမြတ်သည့်ဘုရားကို ကိုးကွယ်သည်ဟုဆိုပြီး သူတို့နှင့် မခြား ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် ရောဂါဝေဒနာများ အဘယ့်ကြောင့် ခံစားနေရသေး သနည်းဟု မေးလေ့ရှိပါသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့် သက်သေခံလျက် ရှင်းပြရ လျှင်၊ တစ်ခါက ကင်ဆာရောဂါကုဌာန၏အထူးခန်းတွင် လူနာနှစ်ဦးရှိနေပြီး နှစ်ဦးလုံး မကြာမှီ သေဆုံးရမည့်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ လူနာတစ်ဦးက ၄င်း၏ဘဝအတွက် မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ယူကျုံးမရ ဝမ်းနည်းငိုကြွေးနေသော်လည်း သူ့နံဘေးမှ လူနာက ဝေဒနာ ခံစားနေရသည့်ကြားမှ ၄င်းအား အားပေးနှစ်သိမ့်လျက် ယေရှု အကြောင်း ပြောပြပြီး ဆုတောင်းပေးနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ခရစ်ယာန်များလည်း လူသားထဲမှ လူသားပေမို့ အခက်အခဲ ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့် ရောဂါဝေဒနာများ ခံစားရနိုင်ပါ သေးသည်။ သို့သော် ထိုအရာများတို့က ဘုရား၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဝေးကွာမသွားစေ နိုင်ပါ။ လူတစ်ဦးအနေဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမည့် လောကဓံကို မကြောက်တော့ခြင်းသည် သာ စစ်မှန်သော လွတ်မြောက်ခြင်းသာတည်း။ သေခြင်းတရားသည် အို နာ သေခြင်း ကင်းဝေးသည့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ဝင်စားရာ တံခါးတစ်ချပ်သာတည်း။
Filed under: ကွဲပြားခြင်း — amayaphay @ 11:13 am
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏တစ်ဦးခြင်း အခြေခံ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက် လို့လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များကို သိလိုပါသည်?
ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်း၊ သက်သေခံခြင်း၊ မိသဟာယဖွဲ့ခြင်းနှင့် ထိုအချက်တို့ကို နာခံ လိုက်လျှောက်သော အသက်တာ ရှိရပါမည်။ လူတိုင်းတွင် လူတို့မြင်နိုင်သော အပြင်လူနှင့်(ကိုယ်ခန္ဓာ) လူတို့မမြင်နိုင်သော အတွင်းလူ(ဝိညာဉ်) ဟူ၍ နှစ်ပိုင်း ရှိပါသည်။ ဆုတောင်းခြင်းကို ဝိညာဉ်အသက်ရှုခြင်း၊ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကို ဝိညာဉ်အစာစားခြင်း၊ ဘုရား၏ ကောင်းမြတ်ကြောင်း သက်သေခံခြင်းကို ဝိညာဉ်စကား ပြောခြင်း၊ မိသဟာယဖွဲ့ခြင်း (အသင်းတော်တွင်ပါဝင်ခြင်း)ကို ဝိညာဉ် လေ့ကျင်ခန်း လုပ်ခြင်းဟူ၍ တင်စားထားပါသည်။ သေသောသူသည် အသက်လည်းမရှု အစာလည်း မစားတော့ပါ။ အသက်လည်းမရှု အစာလည်းမစား (ကျမ်းစာမဖတ်၊ ဆုမတောင်း) ပေမည့် ခရစ်ယာန်ဟု အမည်တပ်ထားသူ လူပေါင်းများစွာရှိနေပါသည်။
Filed under: ကွဲပြားခြင်း — amayaphay @ 9:25 am
စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန် နှင့် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုအဘယ် ကဲ့သို့ခွဲခြား သိမြင်နိုင်ပါမည်နည်း ?
ယေရှုဘုရား၏နာမကို အမှီပြု၍ဟောကြားခြင်းနှင့် တန်ခိုးနိမိတ်တို့ကို ပြုနိုင်ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်တော်မူ၏ဟု ဆိုခြင်းကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသော သူ နှင့် မရှိသောသူ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရှိသောအသင်းတော် နှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မရှိသောအသင်းတော်တို့ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တွင် ဘုရားသခင်မရှိပါ။ (၁ ယော ၄း၈၊ ၁ ကော ၁၃)
Filed under: ကွဲပြားခြင်း — amayaphay @ 9:23 am
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားများ ဖြစ်ကြ ပါသလား?
ယေရှုက ငါ့ကို သခင်သခင်ဟုခေါ်သောသူတိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုကို သခင်ဟု ခရစ်ယာန်များသာ ခေါ်ကြပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ခုက ခရစ်ယာန်များကို သုတေသနပြုလုပ်ကြည့်ကြရာ လူတစ်ရာတွင် ဆယ်ငါးဦးခန့်သာ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိ ခဲ့ရပါသည်။ ထိုစစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်မဟုတ်သူများထဲတွင် တရားဟော ဆရာများနှင့် တန်ခိုးနိမိတ်ပြုနိုင်ကြသောသူများပင်လျှင် ပါဝင်ကြောင်း သိရပါသည်။
Tags: လူ, လူ့ဘ၀
အပယ်ငရဲမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူနှင့်ပတ်သက်၍ လောကတွင် လူဘယ်နှစ်မျိုး နှစ်စားရှိပါသနည်း ?
မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ခြင်းရပြီဟု လူတကာရှေ့ နှုတ်အားဖြင့်ဝါကြွား သက်သေခံနေပါသော်လည်း အမှန်တကယ်မရသေးသော ပုံသက်သေကောင်းမရှိသူ၊ ကယ်တင်ခြင်း အမှန်တကယ်ရရှိနေကြောင်းကို နှုတ်အားဖြင့်ရှင်းမပြတတ်သော်လည်း ပုံသက်သေအားဖြင့် ယေရှု၏ တပည့်တော်ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားသူ၊ ကယ်တင် ခြင်းရပြီးကြောင်း မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အမှန်တကယ်သိပြီး အမှန်တကယ်လည်း ရသောသူ၊ ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းကို သိလည်းမသိ ရရှိခြင်းလည်း မရှိသေးသော သူတို့ဖြစ်ကြပါသည်။
Filed under: ကွဲပြားခြင်း — amayaphay @ 9:19 am
ယေရှုကိုကိုးကွယ်မှုနှင့် ဆင်းရဲချမ်းသာမှုသည် မည်သည့်အပေါ်တွင် မူတည် ပါသနည်း ?
လောကတွင် လူလေးမျိုးရှိပါသည်။ လူရှေ့ ဘုရားရှေ့တွင်ချမ်းသာသူ၊ လူရှေ့တွင်ချမ်းသာပြီး ဘုရားရှေ့တွင်ဆင်းရဲသူ၊ လူရှေ့တွင်ဆင်းရဲပေမည့် ဘုရားရှေ့တွင် ကြွယ်ဝချမ်းသာသောသူ (ဥပမာ ယေရှု၏ နောက်လိုက်တမန်တော်များ) နှင့် လူ့ရှေ့မှာ ကောဘုရားရှေ့တွင်ပါ ဆင်းရဲသောသူတို့ဖြစ်ကြပါသည်။